Iindlela ezintsha zokuhamba: Ukunyuka kweendleko zokuhamba kunye nabahambi abangacacanga
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Iindlela ezintsha zokuhamba: Ukunyuka kweendleko zokuhamba kunye nabahambi abangacacanga
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuhamba kuya kubiza kakhulu kwaye akuqinisekanga kunakuqala, ngokophando lwamva nje.
Inkcitho yokuhamba inyuke ngama-330 eedola kuhambo ngalunye ngenxa yeemfuno zokungena ezinxulumene ne-COVID-19.
Iipesenti ezingama-58 zabantu baseMelika abahambele phesheya ehlotyeni khange bagonywe, ngokophando.
Iipesenti ezingama-47 zewaka leminyaka zenqabile ukuhamba ngenxa yeendleko eziphezulu, ngelixa iipesenti ezingama-25 bezisoyika ukuhamba nabantwana abangafumananga.
Kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo emva kokuqala kobhubhane we-coronavirus, amazwe avule imida kubahambi. Uphando lwakutsha nje lufumene iindlela ezintsha nezikhulayo zokuhamba, ekuhambeni kubiza kakhulu kwaye akuqinisekanga kunakuqala.
Olu phononongo luhlalutye idatha ukusuka kubakhenkethi abangaphezu kwama-3,500 XNUMX abahambe phesheya ukuze baqonde ezi ndlela zintsha zokuhamba phakathi kwabantu baseMelika.
Inkcitho yokuhamba inyuke ngama-330 eedola kuhambo ngalunye ngenxa yeemfuno zokungena ezinxulumene ne-COVID-19, kwaye kunjalo nokungaqiniseki, nge-41% yabahambi abathathe inxaxheba ngokukuko kuluntu lokuhamba olunxulumene nohambo lwabo.
Ukongeza, iipesenti ezingama-58 zabahambi baseMelika bezingagcinwanga, ngeyona ndawo ixhaphakileyo Mekhsikho (37%), iGrisi (19%), kwiRiphabhlikhi yaseDominican (12%), Bhahamas (11%), kunye neAruba (13%), kunye neCosta Rica (8%).
Iziphumo zoPhando eziPhambili
I-58% yabantu baseMelika abahambele phesheya ehlotyeni khange bagonywe. Njengoko amazwe ayivula kwakhona imida yawo, abahambi abangagonywanga babuyela kwiindlela ezifanayo zokuhamba ngaphambili kwe-COVID-19.
Abahambi abadala bayanda ngekota yokuba ngama-50 +. Phakathi kolunye utshintsho lwabantu, iipesenti ezingama-47 zewaka leminyaka zenqabile ukuhamba ngenxa yeendleko eziphezulu, ngelixa i-25% yayisoyika ukuhamba nabantwana abangagonywanga.
Florida liziko labakhenkethi abangaqinisekanga: iipesenti ezingama-20 zabahambi baseMelika abangaqinisekanga bahlala eFlorida. Amazwe aphezulu e-4 ase-US ngamatyala asebenzayo e-COVID-19 akhokele ipakethi kuhambo oluninzi oluphuma phakathi kwabantu baseMelika abangafumananga. IFlorida inika ingxelo kubakhenkethi abaninzi abangagonyelwanga, belandelwa yiTexas, New York kunye neCalifornia.
Ukuhamba kungasebenzi kakuhle: Umhambi ngamnye uchitha ngaphezulu kweeyure ezi-5 ukumisela iimfuno zokungena kunye nokuzalisa uxwebhu. Ukongeza, iipesenti ezingama-23 zabahambi abathi baqhakamshele inqwelo moya yabo, ihotele, ”okanye iqonga lokuhamba ukuqonda iimfuno zokungena ngeenqwelomoya zibiza amaxesha okulinda asebenza iiyure.
Olu phando luqaqambisa iinkqubo ezingafanelekanga ezibekwe ngoorhulumente. Ngelixa kuqondakalayo ukuba zikhona iimfuno zokugcina i-COVID-19 isendaweni, amazwe kufuneka alungelelanise inkqubo. Njengoko amazwe ejonge ukuvuselela ukhenketho, athatha kancinci impembelelo yeenkqubo ezikhawulezayo, ezifanelekileyo kunye neenkqubo ezicacileyo, nekulula ukuziqonda ezinazo.
Amazwe azise uluhlu lweemfuno zokungena, okwenza ukuba kubize kakhulu ukuhamba kunakuqala. Ngokomndilili, iindleko ezongezelelweyo zongeza ukuya kuthi ga kwi-330 yeedola kumhambi ngamnye kwaye zenza ii-visa ze-COVID-19, i-inshurensi yokuhamba kunye novavanyo lwe-COVID-19. Ukongeza, iipesenti ezingama-79 zabahambi bavakalise ukukhathazeka kukungazichazi iihotele kunye neenqwelomoya kwiindleko ezongeziweyo zokuhamba, kodwa emva koko bazifumana kamva xa ukurhoxiswa bekungekho khetho.
I-visa ye-COVID-19, ekwabizwa ngokuba yi-visa yezempilo, yivisa entsha ekufuneka abahambi bayifumane. Ngelixa zisebenza ngombane, imvume ayikhawulezi. Abasemagunyeni baphonononga isicelo ngasinye; zinokungeniswa kuphela kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kohambo kwaye azikho simahla.